ဖက်တီးလေးကို ဝန်းရံပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့်
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ချစ်သက်လေးက သူ့ဇာတ်ကားလေး ရုံအမြန်တင်နိုင်ဖို့အတွက် ဝန်းရံပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ သူပါဝင်ထားတဲ့ “သခင်ကြီးနဲ့ငါးပိတို့စရာ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကား ရုံတင်နိုင်ဖို့အတွက်ပါတဲ့။
သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့်က သူမပါဝင်ထားတဲ့ “ သခင်ကြီးနဲ့ငါးပိတို့စရာ” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အမြန်ဆုံး ရုံတင်နိုင်ဖို့အတွက် ပရိသတ်တွေကို ဝန်းရံပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်ကနေ “ဖက်တီးလေးကို ဝန်းရံပါ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာ သူမက အဓိက မင်းသမီးနေရာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဖြိုးငွေစိုးနဲ့ အခြားသော သရုပ်ဆောင် တွေ ပါဝင်အားဖြည့်ထားကာ ဒါရိုက်တာ စတီးလ်က ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းဇာတ်ကားဟာ သက်မွန်အတွက် စိန်ခေါ်မှု အများကြီး ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ကာ အရမ်းရိုက်ချင်တဲ့ ကာရိုက်တာပုံစံကို ရိုက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တယ်လို့ သက်မွန်က ပြောဖူးပါတယ်။
“သခင်ကြီးနဲ့ ငါးပိတို့စရာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အောင်မြင်စွာ ရိုက်လို့ပြီးပါပြီရှင်! ဒီဇာတ်ကား က သက်မွန်တွက် စိန်ခေါ်မှု အများကြီးရှိပါတယ်! အရမ်းရိုက်ချင်တဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ပုံစံမှုမျိုးကို ရိုက်ခွင့်ရတဲ့ကားပါ။အဲ့ဒီအတွက် ဒါရိုက်တာ ကိုစတီးလ်ရော R-square ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖက်တွေအားလုံး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး အထူးတင်ပါတယ်ရှင် ဒီကားရုံတင်တဲ့ခါကျရင် အားရပါးရ အားပေးပံ့ပိုးကြပါဦးနော်” ဆိုပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ (၇) ရက်နေ့က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။